Imidlalo yebhodi engu-74 ehamba phambili emlandweni | Nginike isikhathi sokuphumula
Impela uthanda ukwabelana ngolwazi nomndeni wakho, nozakwenu noma abangani bakho. Futhi yisiphi isisusa esingcono semihlangano, ngalezo zinsuku ezinemvula noma ezibandayo, noma amaphathi, kunokuba sibe ne imidlalo yebhodi engcono kakhulu eyake yaba khona. Zikhona zazo zonke izinto ezithandwayo neminyaka, yazo zonke izinhlobo zezigaba nezindikimba ezahlukene. Kuyisicefe? Akunakwenzeka! Uzoba nesikhathi esihle ngalezi zihloko esizincomayo lapha.
Ngaphezu kwalokho, sikushiya nokuhlanganiswa kwemidlalo yebhodi ebesiyishicilela ukuze ukwazi ukukhetha evumelana kangcono nalokhu okufunayo:
Imidlalo yebhodi yegumbi lokuphunyuka engcono kakhulu
1 Izinhlobo zemidlalo yebhodi
1.1 Umdlali oyedwa
1.1.1 I-Solitaire enamakhadi
1.1.3 Hhayi ngaphandle kwekati lami
1.1.5 I-Arkham Noir: Ababulali Behlelo Lobuthakathi
1.2.2 Isiqhingi esivinjelwe
1.2.4 U-Arkham wesabeka
1.2.6 Isithabathaba somsangano
1.2.8 Zombicide kanye neZombie Kidz Evolution
1.2.9 I-Mysterium Park
1.2.10 Izinganekwane ze-Andor
1.4 Kubantu ababili noma izithandani
1.4.1 I-Diset Tetris Dual
1.4.3 Bhebha! I-duel
1.4.4 Ikhodi eyimfihlo ye-Duo
1.4.5 Faka isicelo
1.4.6 7 Izimangaliso Duel
1.5 Imidlalo yebhodi yezingane
1.6 Imidlalo yebhodi yomndeni
1.7.1 Isivumelwano Sobukhosi
1.7.2 Umdlalo we-Trick Moth
1.7.3 I-Dobble Waterproof
1.8.3 Amakhyubhu ezindaba
1.9.1 I-Mattel scrabble
1.9.5 Umzila wengcebo
1.9.6 Ifuna imfezi yombuso
1.9.7 Ibhodi elingenalutho
1.10.3 Umdlalo we-Checkers
1.10.4 I-Parcheesi ne-Game of the Goose
1.10.6 Jenga Khulula
1.10.7 Imidlalo eqoqiwe
1.11.1 Indawo ye-Dragon Ball
1.11.2 I-Doom The Board Game
1.11.3 Umdlalo webhodi lezihlalo zobukhosi
1.11.6 I-Indiana Jones Tower
1.11.8 Iphathi & Co. Disney
1.11.10 I-Jurassic World
1.11.11 I-papel casa
1.11.13 I-Cluedo The Big Bang Theory
1.11.14 Lowo osondelayo
1.11.15 UHarry Potter omncane
1.12 Amageyimu ebhodi yamasu
1.12.1 ERA Ephakathi
1.12.3 ITwilight Imperium
1.12.4 Isu Original
1.12.5 Ubungozi obudala
1.12.9 Imemo 44
1.12.10 Imhotep: Umakhi waseGibhithe
1.12.11 Amadolobha Akudala
1.13 Ku-inthanethi futhi mahhala
1.13.1 Amawebhusayithi emidlalo yamahhala
1.13.2 Izinhlelo zokusebenza zamadivayisi eselula
2.2 Imidlalo edlalwayo
3 Indlela yokukhetha umdlalo webhodi ongcono kakhulu
Izinhlobo zemidlalo yebhodi
Lezi yizigaba ezinemidlalo yebhodi ehamba phambili emlandweni, ehlukene ngezigaba nezindikimba. Nabo azikho izaba zokungabi nazo izikhathi zokuzijabulisa ngobuningi:
Lezi Eyedwa futhi enesizungu, awukwazi njalo ukuba nemidlalo embalwa, noma abazimisele njalo ukudlala, ngakho-ke kuhle kakhulu ukuthola owodwa wale midlalo yomdlali oyedwa:
I-Fournier - Deck ...
Idekhi ayikuvumeli kuphela ukuthi udlale eqenjini, ungakha futhi isizungu sakho Ngesitayela seWindows esimsulwa, kodwa etafuleni lakho, kanye nedekhi oyikhethile, isiFulentshi noma iSpanishi. Umdlalo wokukuphazamisa nokugcwalisa amahora wokungenzi lutho.
Thenga amakhadi aseSpain Thenga amakhadi e-French deck
NgoLwesihlanu udinga umdlali oyedwa kuphela, futhi umdlalo wamakhadi. I-adventure lapho uwedwa kuphela ongawina khona umdlalo. Lo mdlalo ukugxilisa endabeni emayelana noRobinson, owaphahlazeka umkhumbi esiqhingini sakho futhi kufanele akusize ulwe nenqwaba yezingozi nabaphangi.
Hhayi ngaphandle kwekati lami
Lona omunye umdlalo futhi yakhelwe umdlali oyedwa, nakuba babekwazi ukudlala kuze 4. Kulula, udlalwa ngamakhadi. Umgomo uwukuqondisa izinyane lekati ukuze likwazi ukufika endaweni enhle efudumele ukuze liphume emgwaqweni. Kodwa-ke, ukuwela imaze yasemadolobheni ngeke kube lula ...
Thenga Hhayi ngaphandle kwekati lami
Umdlalo we-Lúdilo- Bandit ...
Kuyinto umdlalo wekhadi olula, ngisho nezingane. Bangadlala kusukela komdlali oyedwa kuye kwabayi-1. Futhi kuzodingeka uqinisekise ukuthi isigelekeqe esizama ukuphunyuka asiphunyuki. Izinhlamvu zizobe zivimba indlela yokuyibamba. Umdlalo uzophela lapho zonke izindlela zokuphuma sezivaliwe.
I-Arkham Noir: Ababulali Behlelo Lobuthakathi
U-Ludonova - Arkham Noir: ...
Umdlalo ogqugquzelwe izindaba ezimangalisayo ezithusayo ze-HP Lovecraft. Kuyisihloko esikhethekile sabadala okudlalwa kuso sodwa. Mayelana nomlando wayo, kuvele ukuthi inqwaba yabafundi baseMiskatonic University batholakale beshonile. Laba bafundi bebephenya izihloko ezihlobene nokulumba futhi kufanele uthole umnyombo wamaqiniso ngalo mdlalo wamakhadi.
Thenga i-Arkham Noir
Uma okufunayo umoya weqembu lokutholwa, Ngaphandle kokuthuthukisa amakhono okubambisana, yini engcono kunale midlalo yebhodi yokubambisana:
Umdlalo wokubambisana ofanele yonke iminyaka, kusukela eminyakeni engu-8 ubudala. Kuyo kuzodingeka uxazulule imfihlakalo, futhi bonke abadlali bazowina noma bahlulwe ndawonye. Umgomo uwukuthola iqiniso ngokufa komoya ozulazula esithabathabeni somuzi. Kungaleso sikhathi kuphela lapho umphefumulo wakho ungaphumula ngokuthula.
I-Devir-The Forbidden Island ...
Wonke umuntu kufanele asebenze ndawonye ukuze abuyisele izinto ezibalulekile esiqhingini esingaqondakali. Kodwa ngeke kube lula, njengoba isiqhingi sicwila kancane kancane. Thatha izicathulo zabavakashi abangu-4 abanesibindi futhi uqoqe amagugu angcwele ngaphambi kokuthi igcine igqitshwe ngaphansi kwamanzi.
Thenga Isiqhingi Esivinjelwe
I-Mercury- Umdlalo we ...
Umdlalo omuhle wokubambisana wamaqembu futhi ofanele wonke umndeni. Bangadlala kusuka ku-2 kuya ku-12 abadlali. Iqukethe amakhadi ayi-176 azokusiza ukuthi uthole iphesenti eliphezulu legolide emayini. Omunye wabadlali uyisigebenga, kodwa abanye abazi ukuthi ungubani. Umgomo uwukuthola igolide phambi kwakhe ukuze anqobe.
Isekelwe endabeni efanayo ye-Arkham Noir, nesilungiselelo esifanayo. Kodwa lena i-3rd Edition egcwele okuqukethwe okusha, izimfihlakalo ezintsha, ubuhlanya obuningi kanye nembubhiso, kanye nezidalwa ezimbi kakhulu ezizozama ukuvusa ububi obulele. Umdlali uzoba umphenyi ozozama ukugwema le nhlekelele egcwele umhlaba wonke ngosizo lwabanye abadlali kanye nezinkomba ezinikezwayo.
I-HABA 302387 Umdlalo ...
Kungumdlalo wokubambisana owenzelwe abancane, kusukela eminyakeni emine, nakuba abantu abadala nabo bengabamba iqhaza. Umgomo weqembu lezigelekeqe i-Haba Hamster ukusiza ukuqoqa konke ukudla okudingekile ebusika. Konke ebhodini elinazo zonke izinhlobo zemininingwane, izici ezikhethekile (isondo, inqola, ilifti ephathwayo ...), njll.
Izindlu zokuhlala ze ...
Esinye isihloko sokusebenzisana esikufaka emigwaqweni enezimbewu nasezindlini ezinkulu zase-Arkham. Kunezimfihlo nezilo ezesabekayo ezifihliwe. Ezinye izinhlanya namahlelo zenza itulo ngaphakathi kwala mabhilidi ukubiza oMandulo. Abadlali kuzofanele banqobe zonke izithiyo futhi bembule impicabadala. Uzokwazi?
Thenga I-Mansion of Madness
Isihloko esifanele izikhathi. Umdlalo webhodi wokuzijabulisa lapho amalungu ethimba elikhethekile eliqukethe izifo kumele abhekane nezifo ezi-4 ezibulalayo ezisabalele emhlabeni wonke. Zama ukuthola zonke izinsiza ezidingekayo ukuze uhlanganise ikhambi futhi usindise isintu. Ngokuhlanganyela kuphela ...
Zombicide kanye neZombie Kidz Evolution
I-apocalypse ye-zombie isifikile. Ngakho-ke, kuzodingeka nisebenze njengeqembu ukuze nizihlomise futhi nicekele phansi bonke abangasekho. Umdlali ngamunye uthatha indima yomuntu osindile onikezwe amakhono ahlukile, ngakho-ke ngamunye uzoba nendima yakhe. Yile ndlela ozolwa ngayo nesixuku esithelelekile. Ngaphezu kwalokho, inenguqulo ye-Kidz yabancane.
Thenga Zombicide Thenga inguqulo ye-Kidz
I-Libellud Mysterium Park ...
I-Mysterium Park ingenye yemidlalo yebhodi yokubambisana ehamba phambili lapho uzicwilisa khona okulungile okujwayelekile, kodwa okufihla izimfihlo ezimnyama. Owayengumqondisi walo unyamalele, futhi uphenyo alufinyelelanga esiphethweni. Kusukela ngalolo suku, izinto eziyinqaba azizange ziyeke ukwenzeka futhi abanye bayaqiniseka ukuthi umoya wabo uzulazula lapho ... Umgomo wakho uwukuphenya nokuthola iqiniso futhi unobusuku obuyi-6 kuphela ngaphambi kokuba i-fair ihambe edolobheni.
I-Devir - Izinganekwane ze...
Owine umklomelo, lesi ngesinye sezihloko zemifelandawonye ezihamba phambili ongazithenga. Umdlalo odalwe umdwebi odumile uMichael Menzel futhi okuyisa embusweni wase-Andor. Izitha zale ndawo zibheke enqabeni yeNkosi uBrandor. Abadlali bangena ezicathulweni zamaqhawe okuzomele abhekane naye ukuze avikele inqaba. Futhi… qaphela udrako.
Thenga Izinganekwane zase-Andor
Okwentsha, kumaphathi wabangane, ukuchitha izikhathi ezimangalisayo nalabo obakhathalelayo. Yilokho okwenzelwa lolu khetho lwezihloko zegeyimu yabantu abadala ezihamba phambili.
Bona imidlalo yebhodi ehamba phambili yabantu abadala
Kubantu ababili noma izithandani
Lapho isibalo sabadlali sehliswa sibe ababili nje kuphela, amathuba awanqunyelwe. zikhona imidlalo engajwayelekile yamapheya abadlali. Ezinye ezinhle kakhulu yilezi:
I-Diset Tetris Dual
I-Diset - i-Tetris Dual, ...
Umdlalo webhodi odinga izethulo ezimbalwa. Unebhodi elime mpo elinesikhala engxenyeni engenhla lapho ungaphonsa khona izingcezu. Isiqephu ngasinye sinomumo womdlalo wevidiyo we-retro odumile, futhi kuzodingeka ulingane ngendlela engcono kakhulu ijika ngalinye.
Ingenye yemidlalo yebhodi ethengiswa kakhulu emhlabeni. Yakhelwe ngo-1987, iye yasinda kuze kube yilolu suku isilungiswe ngokuphelele. Unebhodi eliyi-hexagonal kanye namamabula athile. Inhloso ukulahla ebhodini amamabula ayi-6 ophikisana naye (kwayi-14 abewamisile).
I-Edge Entertainment ...
Uma uthanda intshonalanga, uzowuthanda lo mdlalo wamakhadi okuyisa eNtshonalanga ekude nesendle lapho uzobhekana nomphikisi wakho ku-duel. Izigebengu ezimelene nabamele umthetho, oyedwa kuphela ongasala, omunye uzoluma uthuli ...
Ikhodi eyimfihlo ye-Duo
I-Devir- Ikhodi eyimfihlo ...
Kungumdlalo wokusebenzisana kanye nemfihlakalo owenzelwe wonke umndeni, udlala ngababili. Kufanele usheshe futhi uhlakaniphe, njengoba uzoba inhloli okuzodingeka ixazulule izimfihlakalo ngokuhumusha izinkomba ezicashile. Amanye angase abe ama-herring abomvu, futhi uma ungakwazi ukuwahlukanisa, imiphumela izoba mibi kakhulu ...
Thenga Ikhodi Eyimfihlo ye-Duo
IMIDLALO YE-SD- Funa, Umbala ...
Inkosi isifile, kodwa akekho owaziyo ukuthi kwenzeke kanjani. Wabonakala ebheke phansi emphongolweni wewayini. Akashiyanga indlalifa eyaziwayo. Leso yisimo lapho igeyimu iqala khona, ehlanganisa izigaba ezimbili: esokuqala umdlali ngamunye uzosebenzisa amakhadi akhe ukuze abuthe abalandeli, okwesibili abalandeli bazolwela ukuthola iningi. Othola amavoti amaningi eqenjini labo uyawina.
7 Izimangaliso Duel
I-Asmodee-7 Wonders: ...
Ifana ngesitayela ne-7 Wonders ewina umklomelo, kodwa yakhelwe abadlali abangu-2. Phumelela futhi unqobe ukuncintisana kwakho ukwenza impucuko yakho iqhubeke. Umdlali ngamunye uhola impucuko, wakha izakhiwo (ikhadi ngalinye limelela isakhiwo) futhi uzosiza ukuqinisa amasosha, ukuthola ukuthuthuka kobuchwepheshe, ukuguqula umbuso wakho, njll. Ungawina ngokuphakama kwezempi, ezesayensi kanye nezomphakathi.
Thenga 7 Wonders Duel
Imidlalo yebhodi yezingane
Uma unayo abancane ekhaya, esinye sezipho ezinhle kakhulu ongabapha sona ngesinye salemidlalo. Indlela yokuthi bathuthuke kahle, bafunde, futhi bahlale kude nezikrini isikhashana ...
Bona imidlalo yebhodi ehamba phambili yezingane
Imidlalo yebhodi yomndeni
Lezi ziphakathi kokungcono kakhulu ongazithenga, kusukela wonke umuntu angabamba iqhaza, abangani, izingane zakho, abazukulu, ogogo nomkhulu, abazali ... Iklanyelwe ngokukhethekile amaqembu amakhulu futhi ajabulisayo kakhulu.
Bona imidlalo yomndeni ehamba phambili
Kubalandeli be imidlalo yamakhadiNazi ezinye ezingakafakwa ezigabeni ezedlule, futhi ezisuselwe kumadekhi:
Amakhadi Okudlala I-Monopoly ...
Umdlalo wakudala we-Monopoly, kodwa odlalwa ngamakhadi. Imidlalo esheshayo nejabulisayo esebenzisa amakhadi esenzo ukuqoqa imali yokuqasha, ukwenza ibhizinisi, ukuthola indawo, njll.
Umdlalo we-Trick Moth
I-Devir - Moth Game ...
Igeyimu yekhadi ehlanganisa ukusabalalisa kubadlali futhi owokuqala ophelelwa yibo uyawina. Ukuze benze lokhu, kufanele baphonsa ikhadi ukujika ngakunye elinenombolo ephakeme noma ephansi ngokushesha kunaleyo esetafuleni. Futhi okuhle kunakho konke, ukuze uwine, kufanele ukhohlise ...
Thenga Ibhu Elikhohlisayo
I-Asmodee - Dobble ...
Igeyimu yesivinini, yokubona kanye nokukhalipha, enamakhadi amaningi angangeni emanzini ukuze ukwazi futhi ukudlala endaweni yokubhukuda ehlobo. Ikhadi ngalinye lihlukile, futhi linesithombe esisodwa kuphela esifana nesinye. Bheka izimpawu ezifanayo, yisho phezulu bese uthatha noma uphonsa ikhadi. Ungadlala imidlalo emincane efika kwemi-5 ehlukene.
Uma imidlalo yebhodi noma yekhadi ingeyakudala, injalo nemidlalo yamadayisi. Nazi ezinye zazo imidlalo yedayisi okuhlonishwa kakhulu:
I-Cayro - Amadayisi Esiphambano -...
Unamadayisi angu-14, isitsha esi-1, ingilazi yehora engu-1, futhi yilokho kuphela. Umdlalo osekelwe ekuphenduleni ukuthuthukisa ukuqonda kokulalela, ukubekezelelana, amakhono okuqonda. Kufanele nje ugoqe idayisi futhi wenze inombolo enkulu yamagama axhumene phakathi nesikhathi onaso. Bhala amaphuzu akho bese unqoba izimbangi zakho.
Thenga ama-Cross Dices
Idayisi Cup 20 ...
Inkomishi nedayisi yikho konke okudingayo ukuze uqhudelane futhi udlale. Kungumdlalo olula, ongadlalwa ngendlela othanda ngayo, kodwa ongamane uwusebenzise ukuze ugoqe amadayisi ubone ukuthi ubani ogingqa izibalo ezinkulu kakhulu, noma uzame ukufanisa izinhlanganisela ezingaphuma.
Akuwona umdlalo wamadayisi wendabuko, kodwa unamadayisi angu-9 anobuso obungaba abalingiswa, izindawo, izinto, imizwa, njll. Umqondo uwukugoqa idayisi, futhi kuye ngokuthi uqhamuke nani, xoxa indaba ngalezo zithako.
Thenga amaCubes weNdaba
I-Ravensburger - Iteleka ...
Umdlalo womndeni wonke noma wabangane. I-duel yomlingo ngokugingqa amadayisi enkundleni ukuze uthole inhlanganisela yezimpawu ezifanayo ongaphonsa ngazo iziphonso neziphonso. Njengoba umdlalo uqhubeka, umdlali uzolahlekelwa amadayisi futhi aqede amandla akhe. Olahlekelwa idayisi kuqala nguyena owehluliwe.
Kulula ukufunda, kuthuthukisa amakhono akho engqondo, futhi imidlalo iyashesha, ngoba akunandaba ukuthi ijika, wonke umuntu ubamba iqhaza. Ukuze uthole amaphuzu, kufanele umake izinombolo eziningi ngangokunokwenzeka.
Elinye iqembu lemidlalo yebhodi elibalulekile umdlalo webhodi. Amabhodi awawona nje isisekelo somdlalo, kodwa angakunikeza ngesimo somdlalo ogxile kakhulu. Amanye amabhodi ayisicaba, kodwa amanye anezinhlangothi ezintathu futhi enziwe kahle.
I-Scrabble ingenye yemidlalo yakudala nejabulisayo yokwenza amagama. Kufanele upelete futhi uxhumanise izinhlamvu ukuze wakhe amagama ngamakhadi ayi-7 athathwe ngokungahleliwe. Uhlamvu ngalunye lunenani, ngakho izikolo zibalwa ngokusekelwe kulawo manani.
Hlela Imidlalo ye-B PBG40020 ...
Lo mdlalo webhodi uzokwenza ukuthi ukhiphe umphefumulo wakho wengcweti, udale amathayili we-mosaic amnandi ngamathayili awo. Inhloso ukuthola imihlobiso engcono kakhulu yombuso we-Evora. Ingadlalwa ngabadlali aba-2 kuye kwaba-4, futhi ifaneleka kusukela eminyakeni eyi-8.
Thenga Okuluhlaza okwesibhakabhaka
I-Tactic Touché Children kanye ...
Umdlalo webhodi onamasu womndeni wonke. Ukuhunyushwa kabusha komdlalo wekhadi ledekhi leSpanish elenziwe. Uyalokotha yini ukuyishintsha?
I-Cefa Toys- Umdlalo weDracula ...
I-classic esuka kuma-80s eyenza ukubuya. Umdlalo okhuthazwe amahlathi aseTransylvania, ezifundeni zenqaba yaseDracula. Amandla obubi namandla okuhle ashayisana njengoba kungokokuqala ukungena enqabeni. Ubani ozoyithola?
Abanostalgic kakhulu bazokhumbula lo mdlalo osathengiswa. Umdlalo ojabulisayo wawo wonke umndeni inhloso yawo kuwukuthenga nokudayisa izinto eduze noLwandle iMedithera phakathi nekhulu le-XNUMX nele-XNUMX. Phatha ingcebo yakho kahle ngenkathi ucwila kulo mdlalo wezigebengu.
Thenga Umzila Wengcebo
Ifuna imfezi yombuso
I-Cefa Toys- Igeyimu ye-Disney ...
Umdlalo wokuzidela womndeni wonke phakathi kokumnandi kanye nemilingo. Esinye salezo zihloko ezazivele zidlalwe ngeminyaka yawo-80 futhi izingane eziningi zangaleso sikhathi sezizokwazi ukufundisa izingane zabo.
DALA Owakho Umdlalo...
Ama-chips, amadayisi, i-hourglass, amakhadi, amakhadi, isondo le-roulette, nebhodi… Kodwa konke akunalutho! Umqondo wukuthi usungula owakho umdlalo webhodi. Ngemithetho oyifunayo, ukuthi ufuna kanjani, ukudweba ku-canvas emhlophe, usebenzisa izitika eziphrintiwe, njll.
Abakwazanga ukuphuthelwa imidlalo yebhodi yakudala, lezo ebeziphakathi kwethu izizukulwane ngezizukulwane futhi aziphumi esitayeleni. Okungcono kakhulu yilezi:
I-StonKraft Isethi ye ...
Ibhodi lezinkuni elilinganisa u-31 × 31 cm, eliqoshwe ngesandla. Umsebenzi wobuciko ongasebenza njengento yokuhlobisa futhi udlale imidlalo engcono kakhulu nanoma ubani omfunayo. Izingcezu zinephansi kazibuthe ngakho ngeke ziwe ebhodini kalula. Futhi ibhodi lingagoqwa futhi liguqulwe libe yibhokisi ukuze libambe wonke amathayili.
Cordays - Icala ...
Amadomino adinga izethulo ezimbalwa. Ungomunye wemidlalo emidala kakhulu emlandweni. Futhi lapha unomdlalo owodwa ohamba phambili, onekesi eliphambili nezingcezu ezenziwe ngezandla. Ngaphezu kwalokho, ayikho indlela eyodwa yokudlala, kodwa kunezitayela eziningana ...
30 × 30 cm ibhodi lezinkuni eliqinile le-birch nezingcezu ezingu-40 zokhuni oluyi-30 mm ububanzi. Kwanele ukudlala umdlalo wakudala woshekha. Umdlalo olula ofanele iminyaka engaphezu kwengu-6.
I-Parcheesi ne-Game of the Goose
I-Cayro - Parchis ne-Oca ...
Ibhodi elilodwa, ubuso obubili, imidlalo emibili. Ngalesi sihloko uzoba nakho konke okudingayo ukuze udlale umdlalo wakudala weParcheesi, kanye nomdlalo wehansi uma uwuphendula. Kufaka ibhodi lamapulangwe elingu-26.8 × 26.8 cm, izigqoko ezi-4, amadayisi angu-4, namathokheni angu-16.
Thenga i-Parcheesi / Goose
I-Falomir- XXL Bingo Game ...
Ibhingo wumdlalo wawo wonke umndeni, owodwa owakudala wesikhathi sonke. Ngesigubhu esizenzakalelayo ukuze uhambe udedela amabhola anezinombolo ezingahleliwe ukuze weqe emakhadini uze uthole ukwenza umugqa noma ibhingo. Futhi ukukhuthaza ukuncintisana, ungadla okuthile ...
I-Jenga ngumdlalo wakudala ovela emakhulwini eminyaka edlule, ezwenikazi lase-Afrika. Kulula kakhulu, futhi wonke umuntu angakwazi ukudlala. Uzomane ukhiphe amabhlogo wokhuni embhoshongweni ngaphandle kokuwa. Umqondo uwukushiya umbhoshongo ungalinganiseli ngangokunokwenzeka ukuze kuthi uma sekuyithuba lomphikisi, ubhidlize. Noma ubani owisa izingcezu uyalahlekelwa.
I-Falomir-400, 400 Amasethi ...
Unesizungu ngomdlalo owodwa nje? Ingabe uhamba kakhulu futhi awukwazi ukuthatha yonke imidlalo onayo? Inketho engcono kakhulu ukuthenga leli phakethe legeyimu elihlanganisiwe lezingcezu ezingu-400. Kufaka phakathi incwadi enemiyalelo yawo wonke umuntu. Phakathi kwalawo makhulu emidlalo kukhona eminye efana ne-chess, imidlalo yamakhadi, amadayisi, ama-dominoes, okuhlola, i-Parcheesi, njll.
Thenga Imidlalo Ehlanganisiwe
Uma ungumlandeli we Uchungechunge lwe-TV, imidlalo yevidiyo, noma amamuvi amamuvi aphumelele kakhulu, kunemidlalo enezihloko mayelana nawo ozoba nomdlandla ngayo:
Indawo ye-Dragon Ball
Abalandeli be-anime ye-Dragon Ball bazomangazwa yile geyimu yamakhadi equkethe abalingisi abavela ochungechungeni oludumile lwe-DBZ. Vele uphonse ikhadi lakho ngesikhathi sakho bese uzama ukushaya lowo omelene naye, ngokwamandla omuntu ngamunye ...
Thenga i-DBZ Deck
I-Doom The Board Game
I-Fantasy Flight Games Doom ...
I-Doom ingenye yemidlalo yamavidiyo edume kakhulu emlandweni. Manje sekufike futhi ebhodini ngalo mdlalo webhodi lapho umdlali ngamunye ezoba umkhumbi wasolwandle ohlomile ukuze azame ukulwa nezilo eziningi ze-infernal ongazicabanga.
Umdlalo webhodi lezihlalo zobukhosi
Umdlalo Wezihlalo Zobukhosi - I ...
Uma uke wakhangwa uchungechunge oludumile lwe-HBO, uzophinde uwuthande lo mdlalo webhodi onetimu ye-Game of Thrones. Umdlali ngamunye ulawula enye yeZindlu Ezinkulu, futhi kufanele asebenzise ubuqili namandla akhe ukuze alawule ezinye izindlu. Futhi konke okunabalingiswa abayizifanekiselo kakhulu zochungechunge.
Thenga i-Game of Thrones
Hasbro Umdlalo Wokuphila -...
Idolobhakazi kanye nabalingisi abavela ochungechungeni oluthandwayo olupopayi baphila lapha, kuleli bhodi elijabulisayo lapho uzozicwilisa khona empilweni yalaba baphuzi abahle.
Ukuphishekela Okuncane I...
I-Trivial Pursuit evamile futhi evamile, enezinyosi zayo, amathayili ayo, ibhodi layo, amakhadi ayo anemibuzo ... Kodwa ngomehluko, nokuthi iphefumulelwe uchungechunge oludumile lwama-zombies.
Thenga i-Trivial TWD
I-Indiana Jones Tower
I-Hasbro The Tower Of ...
Isihloko sokuzidela kanye nekhono, esisethwe kumamuvi e-Indiana Jones, ne-The Temple of Akator njengesilungiselelo. Indlela yokukhumbula le filimu ebingenye yemali eningi ngesikhathi sayo.
U-Noris - Umdlalo ngesiJalimane...
Umdlalo womdlalo, kanjalo neJumanji. Ifilimu edumile emayelana nomdlalo webhodi manje futhi iza ngendlela ye-Escape Room yomndeni wonke. Thola izimfihlakalo futhi ubalekele leli hlathi uphila, uma ukwazi ...
Iphathi & Co. Disney
Okunye okufanayo, i-Party & Co. ejwayelekile, enenqwaba yokuhlolwa kokulingisa, imibuzo nezimpendulo, imidwebo, izimfumbe, njll. Kodwa konke okunendikimba yezinhlamvu eziqanjiwe ze-Disney ezaziwa kakhulu.
Thenga i-Party Disney
I-Diset - Masterchef, Umdlalo ...
Uhlelo lokupheka lwe-TVE nalo lunomdlalo. Dlala nomndeni wonke leli bhodi elibekwe ku-Masterchef kanye nemibuzo esekelwe ohlelweni ukuze ufinyelele umgomo.
Imidlalo nje yePark Jurassic ...
Uma uthanda i-Jurassic Park saga futhi ungumlandeli wama-dinosaurs, uzowuthanda lo mdlalo webhodi osemthethweni ovela ku-movie ye-Jurassic World. Umdlali ngamunye kufanele abambe iqhaza, ukumba futhi athole izinsalela, asebenze elabhorethri ene-dinosaur DNA, akhe amakheji ama-dinosaurs futhi aphathe ipaki.
Uchungechunge lweSpanishi i-La casa de papel seluyishanele i-Netflix, futhi luzibeke njengelinye lamazwe abukwa kakhulu emazweni amaningana emhlabeni jikelele. Uma ungomunye wabalandeli bakhe, lo mdlalo webhodi awukwazi ukushoda ku-repertoire yakho. Ibhodi elinamathayela lapho ningadlala khona njengomndeni onamasela nabathumbi.
I-Marvel universe kanye ne-Avengers sebefikile emidlalweni yebhodi. Kulo mdlalo kuzodingeka uqoqe iqembu lamaqhawe anamandla futhi uzame ukuvimbela i-Thanos ekubhubhiseni iplanethi. Ukwenza lokhu, amagugu angenasiphelo asabalale emhlabeni wonke kufanele atholakale.
I-Cluedo The Big Bang Theory
Kuseyi-Cluedo yakudala, enama-dynamics afanayo nendlela yokudlala. Kodwa ngetimu yochungechunge oludumile lwe-Big Bang Theory.
Thenga I-Big Bang Theory
Lowo ohambayo. Aba...
Uchungechunge lwethelevishini lwaseSpain i-La que se avecina manje nalo lunomdlalo osemthethweni. Dlala esakhiweni esidumile saseMontepinar kanye nabalingisi baso. Ifaneleka kusukela eminyakeni engu-8, futhi ingadlala abantu abangafika kwabayi-12. Emdlalweni izinto zihlongozwa umphakathi, futhi umdlali ngamunye unquma ukuvota noma cha.
UHarry Potter omncane
Ukuphishekela Okuncane - uHarry ...
I-Harry Potter saga inamafilimu aphefumulelwe, uchungechunge, imidlalo yevidiyo, kanye nemidlalo yebhodi. Uma uthanda izincwadi zakhe, manje ungaba nezinkulungwane zemibuzo mayelana nabalingiswa bakhe kanye nendaba yemilingo edume kakhulu yekhulu lama-XNUMX kule Trivia.
Thenga i-Trivial HP
ELEVEN FORCE Trivial Okugcwele ...
I-Hobbit nethi The Lord of the Rings zaziphakathi kwezincwadi eziphumelele kakhulu ezithuthelwe ebhayisikobho. Manje sebekhuthaze nama-vieogames futhi, vele, imidlalo yebhodi efana nale Trivial. Igeyimu ye-trivia yakudala manje isigqokiswe ngale timu yamashiqela yenkathi ephakathi.
Amandla kanye nohlangothi olumnyama manje kuza etafuleni lakho ngale geyimu esuselwe ku-saga yenganekwane yesayensi edumile. Umdlalo wabadlali abangu-2, kusukela kwabaneminyaka engu-14 ubudala, nalapho ungathola khona izimpi ezidumile phakathi kwe-Jedi ne-Sith. Hola amabutho akho ngalezi zithombe ezincane ezibazwe kahle ezinezinhlamvu zenganekwane.
I-Edge Entertainment Dune ...
Kusukela ezincwadini baya emdlalweni wevidiyo kanye nefilimu. I-Dune isanda kubuyela kumatiyetha nenguqulo entsha. Hhayi-ke, ungaphinda udlale lo mdlalo webhodi wamasu omangalisayo. Njengoba izinhlangothi ezinkulu zibhekene zodwa, ngogwadule oludumile kanye neplanethi ewugwadule, nakho konke okulindele eDune.
Amageyimu ebhodi yamasu
bonke labo abanomphefumulo wosomaqhinga nabathanda imidlalo yempi, Capture the Flag (CTF), nokunye okunjalo, bazoyijabulela njengezingane ngale midlalo yamasu elandelayo:
I-ERA Middle Ages -...
I-ERA ikuyisa eSpain yasendulo, umdlalo wamasu onama-miniatures angu-130, amadayisi angu-36, amabhodi emidlalo angu-4, izikhonkwane ezingu-25, omaka abangu-5, kanye nebhulogi engu-1 ukuze uthole amaphuzu. Indlela yokuphinda uphile umlando we-Spanish ngalesi sihloko esihle.
I-Catan Plus (Devir ...
Umdlalo wamasu osezingeni eliphezulu, odayiswe kakhulu futhi waklonyeliswa kakhulu, onabadlali abayizigidi ezi-2 emhlabeni jikelele. Isekelwe esiqhingini saseCatan, lapho abahlali befika khona ukuze bakhe amadolobhana okuqala. Umdlali ngamunye uzoba neyakhe, futhi kuzofanele athuthukise la madolobha ukuze awaguqule abe amadolobha. Ngalokho udinga izinsiza, sungula imifelandawonye yebhizinisi, futhi uzivikele.
Lona omunye wemidlalo yebhodi yamasu ehamba phambili. Isekelwe enkathini ye-post-Twilight Wars, Izinhlanga Ezinkulu ZoMbuso Wasendulo WaseLazax zaya emazweni azo asekhaya, futhi manje kunenkathi yokuzola okubuthakathaka. Wonke umthala uzonyakaza futhi emzabalazweni wokubuyisa isihlalo sobukhosi. Lowo ozuza ibutho lezempi elihlakaniphe kakhulu kanye nokuphatha uyoba nenhlanhla.
I-Diset- Stratego Original ...
Imidlalo yakudala yempi namasu. Ibhodi ongahlasela kulo futhi uzivikele ngobuqili, ukubamba ifulegi lesitha ngebutho lakho lezicucu ezingu-40 ezinamazinga ahlukene.
I-Hasbro Gaming- Ingozi ...
Lo mdlalo uphakathi kwezidume kakhulu zalolu hlobo. Ngayo kufanele uklame isu lokubusa umhlaba. Ngezibalo ezibuyekeziwe ezingama-300, ohambweni olunamakhadi, nomklamo ocophelela kakhulu. Abadlali kufanele bakhe ibutho, bahambise amasosha kumephu futhi balwe. Ngokuya ngemiphumela yedayisi, umdlali uzowina noma ahlulwe.
Kuthiwani uma zonke izigilamkhuba ze-Disney zihlangana ndawonye kumdlalo ukuze zenze uhlelo lwe-Machiavellian? Khetha umlingiswa omthandayo futhi uthole amakhono ayingqayizivele anawo. Dala isu elingcono kakhulu ekujikeni ngakunye bese uzama ukuwina.
Imidlalo ye-Lookout 22160028 -...
Kusuka e-Uwe Rosenberg, leli phakethe lihlanganisa amabhodi egeyimu angu-9 anezinhlangothi ezimbili, amatshe ento engu-138, izitembu zokudla okunomsoco ezingu-36, amatshe ezilwane angu-54, amatshe abantu abangu-25, izincingo ezingu-75, izitebele ezingu-20, amathokheni ekhabethe angu-24, izindlu zasemaphandleni ezingu-33, amathayela wezivakashi angu-3, ​​ukuphindaphinda okungu-9. amathayela, ibhulokhi yamaphuzu e-1, itshe lokuqala lomdlali ongu-1, amakhadi angama-360, kanye nebhukwana. Ayishodi ngemininingwane ukuze ukwazi ukwakha nokuphatha ipulazi lakho lasendulo lapho ungathuthukisa khona ezolimo nemfuyo ukuze ulwe nendlala ...
Ngokuqinisekile isihloko esithi The Great War, noma The Great War, kaRichar Borg sizwakala sijwayelekile kuwe. Ingumklami ofanayo no-Memoir 44 kanye ne-Battlelore. Isekelwe ezimpini zeMpi Yezwe I, evumela abadlali ukuthi bathathe izinhlangothi futhi badlale kabusha izimpi zomlando ezenzeke emiseleni nasezinkundleni zempi. Umdlalo ovumelana nezimo kakhulu onamakhadi okunyakaza namadayisi axazulula ukulwa.
Izinsuku ze-Wonder 7301 ...
Ngombhali ofanayo, lona omunye ungomunye wemidlalo engcono kakhulu yamasu empi ongayithenga. Setha lesi sikhathi eMpini Yomhlaba Yesibili, ngokunwetshwa okungaba khona nezimo ezihlukile zokwandisa okuqukethwe. Uma uthanda isu lezempi nomlando, kuzokufanela njengegilavu. Nakuba kuyinkimbinkimbi ...
Imhotep: Umakhi waseGibhithe
I-Devir - Imhotep, ...
Buyela emuva ngesikhathi uye eGibhithe lasendulo. U-Imhotep wayengumakhi wokuqala nodume kakhulu ngaleso sikhathi. Manje ngalo mdlalo webhodi ungazama ukufanisa impumelelo yabo ngokuphakamisa amatshe esikhumbuzo futhi udwebe awakho amasu ukuvimbela izimbangi ukuthi ziphumelele.
I-Asmodee - Citadels ...
Lwela ukuba nguMakhi Oyingcweti olandelayo wombuso. Gcoba izicukuthwane ngamakhono akho okuthuthukisa idolobha futhi usize abalingiswa abahlukahlukene ngalo mdlalo wamasu. Unamakhadi ezinhlamvu ezingu-8 ephaketheni ongakhetha kuwo, amakhadi esigodi angu-68, amakhadi osizo angu-7, ithokheni yomqhele engu-1, namathokheni ezinhlamvu zegolide angu-30.
Ku-inthanethi futhi mahhala
Uphinde ube nenqwaba yemidlalo yebhodi eku-inthanethi, ukuze dlala mahhala uwedwa noma nabanye abakude, kanye nezinhlelo zokusebenza zamadivayisi eselula lapho ungazijabulisa khona ngaphandle kokuthi ube mathupha (nakuba lokhu ngokuqinisekile kususa okunye ukukhanga kwakho, futhi ngentengo yokukhanya ... cishe kungcono ube nomdlalo womzimba):
Amawebhusayithi emidlalo yamahhala
Izinhlelo zokusebenza zamadivayisi eselula
Ungakwazi ukusesha esitolo -Google Play kudivayisi yakho yeselula noma ku Isitolo se-Apple App, kuye ngohlelo lokusebenza onalo, izihloko ezilandelayo:
I-Catan Classic ye-iOS ne-Android.
I-Monopoly ye-iOS ne-Android
I-Scrabble ye-iOS ne-Android
I-Pictionary ye-iOS ne-Android
I-Chess ye-iOS ne-Android
Igeyimu ye-Goose ye-iOS ne-Android
Kukhona futhi izigaba ezimbili zemidlalo yebhodi okuthi, nakuba ingafakwa kwesinye sezigaba ezedlule, zakha isigaba esizimele ngokwazo. Ngaphezu kwalokho, lezi zithole a impumelelo enonya, futhi banabalandeli abaningi ngokwengeziwe balezi zitayela:
Ama-Escape Rooms aseyimfashini futhi ahlasele yonke indawo yaseSpain. Sezingenye yezinto zokuzilibazisa ezithandwa kakhulu emazweni amaningi, ngoba ikuvumela ukuthi uhlanganyele nabangane noma umndeni futhi uxazulule izindida. Ngaphezu kwalokho, banazo zonke izinhlobo zezingqikithi, ukwanelisa konke okuthandayo (inganekwane yesayensi, ukwesaba, umlando, ...). Amasethi angakholeki okuthi ngenxa ye-Covid-19 anemikhawulo enzima. Ukuze ugweme leyo mikhawulo, kufanele ubheke izihloko ezihamba phambili ze-Escape Room ukudlala ekhaya.
Bona imidlalo yebhodi engcono kakhulu ye-Escape Room
Esinye sezigigaba eziningi ezizuza abalandeli yi ukudlala indima. Ziyalutha ngokwedlulele, futhi kukhona nezinhlobonhlobo zazo, ezinezindikimba eziningi. Le midlalo ikugxilisa endimeni, umlingisi okuzodingeka ukuthi umdlale ngesikhathi somdlalo ukuze ufeze izinjongo.
Bona imidlalo yebhodi yokudlala indima ehamba phambili
Indlela yokukhetha umdlalo webhodi ongcono kakhulu
Ngesikhathi sika khetha imidlalo yebhodi efanele ezinye izikhiye kumele zicatshangelwe. Lokhu kucatshangelwa kuzokusiza ukuthi uthenge okulungile ngaso sonke isikhathi:
Inani labadlali: kubalulekile ukunaka isibalo sabadlali abazobamba iqhaza. Kukhona okwabantu abangu-2 kuphela, abanye abantu abambalwa, ngisho namaqembu noma amaqembu. Uma kungokwezithandani noma ezimbili, akubalulekile kangako, ngoba cishe zonke zingadlalwa ngabantu ababili kuphela. Ngakolunye uhlangothi, uma kungokwemibuthano yabangane noma imidlalo yebhodi yomkhaya, lokhu kuba okubalulekile.
Ubudala: kubalulekile ukuqinisekisa iminyaka igeyimu enconyelwe yona. Miningi imidlalo eyenzelwe wonke umuntu kusukela kuzingane kuya kwabadala, ngakho ilungele ukudlala njengomndeni. Kunalokho, okunye ngokuqukethwe kuqondiswe kwabancane noma abantu abadala.
Gxila: eminye imidlalo eyokuthuthukisa inkumbulo, eminye ukuthuthukisa ukucabanga, amakhono okuxhumana nabantu, ukukhuthaza umsebenzi wokubambisana, noma amakhono emoto, ngisho nemfundo. Ngaphandle kwazo ezezingane, lokhu nakho kubalulekile, ngoba okufanele kakhulu kufanele kukhethwe ngokuvumelana nezidingo zengane.
Isihloko noma isigaba: Njengoba usubonile, kunezinhlobo eziningana zemidlalo yebhodi. Akuwona wonke umuntu othanda wonke umuntu, ngakho-ke kubalulekile ukwazi indlela yokubona isitayela sokudlala sesigaba ngasinye ukuze uphumelele ngokuthenga.
Inkimbinkimbi nokufunda ijika: kubaluleke kakhulu uma abasha noma abadala bezodlala, ukuthi inkimbinkimbi yomdlalo ayiphezulu, nokuthi unejika lokufunda elilula. Ngale ndlela bazokwazi ukuqonda ukuguquguquka komdlalo ngokushesha futhi ngeke balahleke noma bakhungatheke ngokungazi ukuthi badlale kanjani.
Dlala isikhala- Imidlalo eminingi yebhodi ikuvumela ukuthi udlale kunoma yiliphi itafula noma indawo evamile. Ngakolunye uhlangothi, abanye badinga indawo encane egumbini lokuphumula noma igumbi legeyimu. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuhlaziya imikhawulo yekhaya kahle kakhulu futhi ubone ukuthi umdlalo okhethiwe ungavumelana kahle nemvelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Nginike isikhathi sokuphumula » General » Imidlalo yebhodi ehamba phambili eyake yabakhona